Daawo: Warbixin ku saabsan Dagaalkii Tukaraq iyo Sida looga dareen-celiyey | Kalshaale
Daawo: Warbixin ku saabsan Dagaalkii Tukaraq iyo Sida looga dareen-celiyey
Laascaanod (Kalshaale) Dagaal Qadhaadh oo Khasaare kala duwan uu ka dhashay ayaa maalintii shalay ka dhexqarxay Ciidamada Puntland iyo Kuwa Somaliland, oo Mudooyinkii ugu dambeeyay isku Horfadhiyey deegaano ka tirsan Gobolka Sool.
Madaxwaynaha Somaliland ayaa maalintii shalay dagaalka kala dhexeeya Puntland ku eedeeyay wax uu ku sheegay “Dawladda Federaalka ah ee Somaliland ” Sidoo kale Puntland ayaa dhankeeda sheegtay in dagaalka lagu soo qaaday.
Madaxwaynaha Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku baaqay In Nabad Gelyo Lagu soo dabaalo Xaalada magaalada Tukaraq ee dagaaladu ka dhaceen, islamarkaana aan dhiig Lagu Faraxalan iyadoo loo diyaar-garoobay Bishii Khayrka.
Xaalada deegaanka ayaa maanta kacsan, waxaana soo gaadhay Gurmado ciidan oo kala kala yimid Goobo kala duwan.
ABTOOOOOOW, arrinto ma joogto TUKARAQ. Hadda aan kula hadlaayo, dagaalka ugu adkaa wuxuu ka socdaa:
Waxaana faraha la isug tegay labaadaas tuulo oo ay ku yaaleen SALDHIGYADA ugu waaweyn ee ay lahayd IIDOORKO.
CIIDAMDA HARTI, waxee doonayaa in ay qabsadaan BUUNDADA ka dambeeysa GAMBARA, se ay u gadoomiyaan dhamman dhaqdhaqaaqa ciidmada IIDOOR.
Marka, aan daawano oo dhigaysano wax kala qabsada, HARTI DAAROOD iyo IIDOOR WAGASHLEEE.
Meeqo sanno lahaa, war IIDOOROOOW dhulkeena ha idin qaado.
Ku qaad heestii ahayd:
+++ NINKII DHOOF KU YIMID BAA GEERIDO DHIBAYSAAA.
HARTIGO waa xaq u dirir. IIDOORKUNA waa xaq-darro u dirir iyo guri uusan lahayn.
ABTIGEEY CABDULLAHI YUUSUF AXMED aan ka qortay orahdaan:
+++ NINKII HAWADIISO BEEN U SHEEGTO, TABARTIISA RUN U SHEEGAYSAA..
Waxba ismabadalin tukoraq Wali mujahidiin ta ayaa jooga daarood kii 6 bilood isasoo abaabulayay waxba way Tari wayeen God qaboobena anaa lawareegay kkkkkkk warkaaba mahayno dabaaldagii ayaanu Wali kujiraa